🥇Forex CFD Broker Libertex Review - Full Eprel 2021 Ntuziaka
Nyochaa Libertex: Gbasaa, Platgwọ Platform, Akụ Ahịa, Na Iwu 2021
O nwere oge n’afọ 1980 mgbe a na-ewere ụlọ ahịa a ma ama dị ka ebe ndị ọgaranya na-egwuri egwu. Daysbọchị ndị a, ọ nwere ike ịnweta onye ọ bụla nwere njikọ ịntanetị.
N'ezie, n'ime afọ 2021, e mere atụmatụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 10 na-azụ ahịa na ịntanetị. Nke a bụ nnukwu ozi maka ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị.
Taa, anyị ga-enyocha usoro azụmaahịa Libertex ndị ama ama. Enwere ihe karịrị 200 CFD na saịtị a ma onye na-ere ahịa emeriela akara iri atọ na mba ụwa - gụnyere 'Best Trading Platform'!
Anyị ga-ebido site na ntakịrị ozi gbasara ụlọ ọrụ ahụ, tupu anyị agafee ihe ị nwere ike ịzụ na ụgwọ ị ga-atụ anya ịkwụ. Site na njedebe nke ịgụ nyocha anyị Libertex zuru ezu, ị ga-enwerịrị ike ịme mkpebi azịza maka ma onye na-ere ahịa ọ dị mma maka mkpa azụmaahịa gị.
Gịnị bụ Libertex?
Dika anyi meturu aka, Libertex merie otutu onyinye tinyere 'Best Trading Platform of 2021'. Onye na-ere ahịa na-enye ọrụ azụmaahịa kemgbe 1997, na-akwado ndị ahịa karịrị 2.2 si mba dị iche iche. Ihe ikpo okwu a nwere ikike zuru oke ma degharia ya site na CySEC.
N'ihe banyere ngwá ọrụ tradable, Libertex bụ ọkachamara na CFDs. Ọbụghị naanị na nke a na-abịa n'ụdị mkpuchi - kamakwa ETF, ebuka, Forex, ọla, ọrụ ugbo, indices na gas. Chekwaa ngwa ahịa dị egwu karịa na mgbe emesịrị.
N’ụzọ dị oke mkpa, Libertex bụ naanị otu n’ime ndị na-ere ahịa na ntanetị n’ịntanetị Zero gbasara maka ndị ahịa ya. Kama, ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ. Anyị ga-abanye obere nkọwa zuru ezu banyere ọrụ ị nwere ike ịtụ anya ma emechaa na nyocha a nke Libertex.
Kedu ihe m nwere ike ahia na Libertex?
Dị ka anyị kwuru Libertex na-elekwasị anya na CFDs - nke pụtara na e nwere ọtụtụ narị tradable akụ n'elu ikpo okwu a. Fọdụ n'ime ndị kachasị ewu ewu gụnyere indices dị ka Dow Jones na DAX, n'akụkụ ngwaahịa ndị dị ka mmanụ Brent Crude.
N’okpuru ị ga - ahụ nbibi zuru oke nke ụdị akụ ị nwere ike ịzụ na Libertex.
Dị ka anyị tụrụ anya ya, Forex ahịa kachasị na saịtị ahụ bụ GBP / USD na EUR / USD. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ego ndị ọzọ a na-enye, nke anyị depụtara n'okpuru.
Exotic ụzọ abụọ gunyere CHF / SGD, EUR / CNH, USD / DKK, EUR / NOK, GBP / SEK, EUR / RUB, ị ga-ahụkwa ego dịka South African rand (ZAR) Mexico peso (MXN)
Isi ụzọ abụọ na-enye site na Libertex bụ EUR / USD, AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD, USD / CAD, USD / CHF, na USD / JPY
Cross ụzọ abụọ dịnụ bụ AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / CHF, CAD / CHF, GBP / AUD, GBP / NZD, GBP / CAD and heaps more
Ndị ahịa azụmaahịa na Libertex nwere ike ịzụ ahịa ụzọ abụọ CFD na ntinye nke 1:30. Enwere ike iru nke a site na MT4 ma ọ bụ ngwa Libertex.
Ahịa na Ahịa
Czụ ahịa ngwaahịa CFDs site na Libertex pụtara na ị nwere ike ịzụta ma ree ọnọdụ oke na-enweghị ịnweta akụ. Kama nke ahụ, ị ​​na-eche naanị ma mbak ahụ ga-ebili ma ọ bụ daa. Na isiokwu nke ebuka, enwere ihe karịrị 50 ịhọrọ site na ikpo okwu a.
Anyị enweghị ike ịdepụta nke ọ bụla, yabụ anyị edepụtara edemede ndị dịnụ, yana ihe atụ ole na ole nke ọ bụla:
Ahịa ibu: Coca Cola, Nike, Adidas AG na Proctor na Gamble
Teknụzụ: Netflix, Spotify, Dropbox, China Mobile, Vodaphone
Ọkwá: Estée Lauder, Michael Kors Holdings, Ralph Lauren, Tiffany & Nakwa
Ụlọ ọrụ: Boeing, katapila
Ego: American Express, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, MasterCard
Industrieslọ ọrụ ụgbọ ala: Harley Davidson, Ferrari, Motorgbọala Ford
Ike: Eletriki de France (EDF), Enel Chile SA, PetroChina
Nkwukọrịta Apple, Amazon, Hewlett-Packard, Pinterest, Microsoft, Twitter
Nlekọta ahụike: Aurora Cannabis, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group
Akụrụngwa ebuka: dị ka Sociedad Quimica y Minera de Chile (na-eme fatịlaịza na kemịkal)
Maka ndị na-agba bọọlụ, Juventus Football Club SPA bụ nke na-enye mmụba kachasị nke 1: 600 ndị ahịa ọkachamara. Onu ogugu kacha nta na ahia CFD ga adighi ihe kariri 20 Euro.
N'okwu nke indices, e nwere ọtụtụ iji tinye aka na - akụ na ụba Europe na America, na-agbatị ruo Eshia, na Israel 35 na Middle East.
Ka anyị lelee ụfọdụ n'ime indices ị nwere ike itinye ego na Libertex.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’ahịa ndị dị n’Ebe Ugwu America ị ga-ahụ ndị egwuregwu buru ibu dị ka Dow Jones, S&P 500, NASDAQ 100, Russell 2000, ịkpọ aha ole na ole.
Abịa na European indices ị nwere ike itinye ego na DAX, Spain 35, FTSE 100, Italy 40, Russia50 Index na ndị ọzọ.
Onyinye Asia bu China A50, Nikkei 225 na Hang Seng Index, na South America, anyi nwere Index nke Chile.
N'ihe banyere ngwa ahia n'elu ikpo okwu a, ị nwere ike iji ngwa CFD zụọ ngwá ọrụ ndị a:
Brent mmanụ mmanụ
Ìhè ụtọ manu
Ọla dịka gold na ọla kọpa
Crypto CFD trading na Libertex dị mfe. Onye na-ere ahia na-enye ọtụtụ cryptocurrencies site na Bitcoin ruo Chainlink.
Anyị ejirila ndepụta nke ụfọdụ mkpụrụ ego crypto nwere ike ịmịpụta ka ị mara ihe ị ga-enweta n'elu ikpo okwu:
Ego Bitcoin / USD
Bitcoin Cash / Bitcoin (obe ụzọ)
Litecoin / Bitcoin (obe ụzọ)
Bitcoin / EUR (ụzọ obe)
Ethereum / Bitcoin (uzo obe)
Omuma Ethereum / USD
Monero / Bitcoin (obe ụzọ)
EOS / Ethereum (obe ụzọ)
Enwere ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ crypto na Libertex, yana dịka anyị kwuru, ọ nweghị mgbasa na-echegbu onwe gị.
Maka ndị na-amaghị - an ETF (Exchange Traded Fund) na-agụnyekarị ịdepụta usoro ndabere nke nhọrọ nke nchekwa, na-eji ọtụtụ ọrụ ma ọ bụ ọtụtụ atụmatụ.
Nke a bụ ihe atụ nke ETFs dị n'elu ikpo okwu - nke ọzọ, enwere ike ịzụ ahịa site na ngwa MT4 ma ọ bụ ngwa Libertex:
iShares Core US aggregate Bond ETF nwere 27% agbụ ụlọ ọrụ, 28% nnyefe ego, yana gọọmentị 45%
Otu ETF a dịkwa iche iche dịka: 1% Canada, 6% Germany, Mexico, Netherlands, Japan, Australia, Ireland, Colombia na 93% USA.
Rịba ama, ị ga - ere 'ETF dị n'elu site na CFDs - dị ka ahịa ego niile na Libertex.
A bịa n'ụgwọ, onye ọ bụla na-azụ ahịa ọ bụla ga-adị iche. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ dị mkpa ịme nyocha nke gị mgbe niile tupu ịbanye maka akaụntụ ahịa ọhụrụ.
Iji chekwaa gị ụfọdụ legwork anyị na-a lee anya na isslọrụ, gbasara ma ọ bụla mmezi ụgwọ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na Libertex.
Lọrụ na mgbasa
Ka anyị na-emetụ na mbụ, Libertex bụ otu n'ime ole na ole Broka ka scrap na-agbasa kpamkpam na naanị ụgwọ isslọrụ na trades. Ka anyị jegharịa n'ụgwọ ọrụ ụfọdụ n'elu ebe a.
Ọrụ a ga-ebo gị ebubo ga-adị iche dabere na akụ ma ọ bụ azụmaahịa a kapịrị ọnụ. Commlọ ọrụ na ụdị ego abụọ a ma ama dịka GBP / USD, dịka ọmụmaatụ, na-adịkarị gburugburu 0.008%.
Nke a bụ ihe atụ nke otu ọrụ a ga-esi lee anya:
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụ GBP / USD
Risk n'ihe ize ndụ $ 1,000 na ahia
Na ore ahia ebubo 0.008%
Feegwọ maka ahia ahụ ga-abụ $ 0.08
N'ihe banyere ebuka, ọrụ ahụ na-eguzo n'ebe dị n'etiti 0.1% -0.2%. N'ihe banyere crypto ụzọ abụọ na ikpo okwu a, ego ịzụ ahịa na-amalitekarị na gburugburu 0.47%, na-aga 2.5% na obere mmiri mmiri. Nke a na-abụkarị ikpe na abụọ cross crypto.
Banyere ụgwọ ọrụ, ị kwesịrị ị na-eme mgbe ị na-amụ ihe a ga-akwụ na ahịa ịchọrọ tupu ịdebe ahịa. Nke a ga - enye gị nghọta bara uru banyere uru uru ma ọ bụ mfu gị nwere ike ịba.
Esgwọ ndị ọzọ
Libertex anaghị akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa maka ọrụ ya, na efu na-agbasa - mana n'ezie, onye na-ere ahịa ka kwesịrị ịkpata ego. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị ga-abanye n'ime ụgwọ ole na ole ndị ọzọ iji lelee anya na saịtị ahụ.
Nke mbụ - ọ bụrụ na ịnwee njikwa akaụntụ nke $ 10,000 ma ọ bụ obere - mgbe ụbọchị 180 nke arụghị ọrụ gasịrị, onye na-ere ahịa CFD ga-akwụ 'ego arụghị ọrụ'. Enweghị ụgwọ ọrụ bụ ezigbo ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ a na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ a mgbe naanị ụbọchị 30.
N'ịga n'ihu na ụgwọ / mgbanwe gbanwere n'abalị, a na-akwụ ụgwọ ego a n'ọnọdụ ọ bụla a hapụrụ na njedebe nke ụbọchị ahia. N'ihe banyere ngwa CFD, ego a ga-agba okpukpu atọ ma ọ bụrụ na ịmegharị ọnọdụ gafee izu ụka.
Ndakọrịta Platform Ndabere
Ọ bụghị ndị na-ere ahịa niile dakọtara na ngwaọrụ azụmaahịa nke atọ. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere obi ụtọ ịkọ na ọ bụghị naanị na Libertex dakọtara na MT4 a ma ama - mana onye na-ere ahịa nwekwara ya nke ukwuu na ngwa na ngwa.
Nke a bụ ntakịrị ihe ọmụma gbasara ngwaọrụ na nyiwe ndị a bara uru.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa nwere oge ejirila MT4 n'oge ụfọdụ. Nke a Libertex-dakọtara trading n'elu ikpo okwu na-juru n'ọnụ na ntụhie na bara uru trading ngwaọrụ, chaatị dị iche iche na analysis. Dingzụ ahịa site na MT4, ndị ahịa nwere ike iji ihe karịrị otu akaụntụ, yana ọbụlagodi site na iji ígwè ọrụ ntanetị.
Anyị edepụtara ụfọdụ ụfọdụ atụmatụ kacha mma ka ị wee rite uru na mgbe ị na-eji MT4 zụọ ahịa na Libertex:
Ihe ngosi na-enye aka dịka Diverver Convergence (MACD), Bollinger Bands, Ngosipụta Na-agagharị Na-agagharị (EMA), Ichimoku na obo ihe ndị ọzọ
Ngwa ahia dị iche iche gụnyere mana ọnweghị oke na Ngosipụta iwu, Xandra Summary, Chart Undock, SHI Channel True, Ọnọdụ Calculator Ọnọdụ, ụkpụrụ SL & TP, Mpaghara Breakout ,, Autofibo, i-Profit Tracker, NewsCal, na ọtụtụ ndị ọzọ
Nhọrọ usoro: usoro ahịa, ịzụta nkwụsị, ire nkwụsị, ire oke, ịzụta oke, ịzụta site n'ahịa ma ree n'ahịa.
Rịba ama, MT4 dị site na ngwanrọ desktọọpụ na ọbụna ngwa mkpanaka zuru ezu. Banyere nke ikpeazụ, nke a na - enye gị ohere idobe taabụ otu robot azụmaahịa akpaghị aka gị si arụ - n'agbanyeghị ebe ị nọ!
Dị nnọọ ka na Libertex website, kacha nta ahia olu na Libertex ngwa bụ n'ozuzu 10 nkeji gị ego ($ 10, £ 10, wdg). Na nke ahụ kwuru, ngwaahịa CFD dị ntakịrị elu na nkeji 20.
Onwere ihe nkwuputa uzo nke ihe omuma ihe omuma, ozi ego na ihe omuma ahia na ngwa Libertex. Ndị ahịa nwere ike ibudata ngwa ahụ site na Google Play maka gam akporo ma ọ bụ Applọ Ahịa Apple. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ibudata ngwa ahụ na weebụsaịtị Libertex.
Ndị ọrụ na-ahụ maka ngwa a gosipụtara nke ọma site na ndị ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na-aja ngwa ahụ maka ngwa ọrụ enyi na enyi yana ọrụ enyemaka. Site na nkwụ aka gị, ịnwere ike ịme iwu, nweta ohere ị na-ekwu okwu, ịkwụnye / wepụ - na ndị ọzọ.
Ngwa ahia na ngwa mmuta
Libertex na-enwu ma a bịa n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. Dịka onye ahịa, ị ga-enwe ike ịnweta webinars, plethora nke vidiyo vidiyo zuru ezu na akụkọ gbasara ego na akara ngosi.
Na mgbakwunye na ọdịnaya vidiyo, enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 nkuzi ọzụzụ dị iche iche gbara gburugburu akụ dị iche iche - echefula na akaụntụ ngosi ego na-akwụghị ụgwọ gụnyere dollar demo 50,000.
Onu ahia ahia ahia ahia bu 1:30. Nke a bụ ihe eji akwụ ụgwọ n'ọtụtụ usoro ntanetị. Nke a bụ n'ihi ụkpụrụ nchekwa nchekwa ESMA. N'ihi ya, nke a bụ ụkpụrụ omume gafee Europe.
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ahịa ị nwere ike ịnweta leverage up a whopping 1: 600. Otú ọ dị, iji ruo eru maka ụdị akaụntụ a, ị ga-achọ ịnye ntakịrị akụkọ banyere ịzụ ahịa na ụfọdụ nkọwa ego zuru ezu.
Enwere ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị na saịtị a mana ị ga-enyocha ihe dịnụ dabere na obodo obibi gị.
N’okpuru, anyị edepụtara usoro ịkwụ ụgwọ niile dị maka nkwụnye ego na nwepu ego na UK. Mgbe ị tinyere ego na akaụntụ gị, a ga-enye gị ọkwa ọkwa kwesịrị ekwesị.
Lelee nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị n'okpuru.
Kaadị kredit / Debit
Nkwụnye ego bụ n'efu na Libertex na oge nhazi mgbe ị na-akwado akaụntụ gị ozugbo. Agbanyeghị, ọ bụrụ na itinye ego site na SEPA / waya akụ mba ofesi, ọ ga-ewe ụbọchị 3 na ụbọchị 5 iji ruo akaụntụ gị. O doro anya na oge nhazi a ga-egbu oge atụmatụ azụmaahịa gị.
N'ihe banyere ebubo iwepụ ego, enwere ụfọdụ ọdịiche dabere na usoro eji. Biko chọta n'okpuru ndepụta nke usoro nnabata na-anabata, n'akụkụ ego (ma ọ bụrụ na ọ bụla) na oge nhazi.
Ebe E Si Nweta Kaadị - eegwọ € 1 - N’ime ụbọchị 1-5
Neteller - Fgwọ 1% - N'ime awa 24
Skrill - erogwọ ụgwọ - N'ime awa 24
SEPA / Nnyefe banki mba ofesi - 0.5% min 2 EUR, max 10 EUR - N'ime ụbọchị 3-5
Ndị Ahịa Nkwado Ndị Ahịa
The Libertex nkwado otu egwuregwu dị site na Mọnde ruo Fraịdee - 8 ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị.
Thezọ ịkpọtụrụ ndị ahịa bụ ekwentị, email, akwụkwọ ozi, na ụdị ịkpọtụrụ kọntaktị.
Enwekwara ngalaba FAQ dịnụ nke na-agbasa ngalaba enyemaka na mpaghara dịka 'ụlọ akụ', 'azụmahịa azụmahịa' na 'ọnọdụ azụmaahịa'.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Libertex na-enye akụkọ dịgasị iche iche nke dabere na ọkwa ọkwa gị na njikwa akaụntụ kacha nta. Na nkenke, mgbe ị na-etinye ezigbo ego na akaụntụ azụmaahịa gị ị nwere ike ịnweta ọnọdụ ọ bụla nwere nguzozi gị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na ihuenyo anyị dị n'elu, ụgwọ ọrụ dị iche iche dị na ọkwa gị na nkwụnye ego gị. Na mgbakwunye na ọkwa 'ọkwa' a kpọtụrụ aha na mbụ, ndị ahịa nwere ohere ịnweta akaụntụ ngosi ego na - akwụghị ụgwọ nke gụnyere $ 50,000 na akwụkwọ ngosi ego. Akaụntụ ngosi a dị maka onye ọ bụla.
Anyị na-eche na akaụntụ ngosi nke Libertex bara ezigbo uru maka ndị ahịa ọhụụ na-adịchaghị njikere itinye ezigbo ego. E wezụga ndị na-etinye ego na newbie, akụkọ ngosi ngosi bụ ezigbo maka ndị nwere ọchụnta ego nwere ahụmahụ bụ ndị chọrọ ịnwale atụmatụ ọhụrụ tupu ha abanye n'ime ahịa ndụ.
Etu esi emeghe akaụntụ nnabata na Libertex
Debanye na akaụntụ na Libertex dị oke mfe. Mana, ka ibido, anyị ejirila usoro ịga ụkwụ atọ zukọta.
Kwụpụ 1: Debanye
Nzọụkwụ mbụ ịdebanye aha bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ Libertex. Odoro n'elu peeji ahụ n'aka nri ị ga - ahụ 'nbanye' - pịa nke a, a ga-akpọrọ gị gaa na ibe ọhụụ.
Ebe ị hụrụ igbe nbanye na aka nri ị ga - ahọrọ 'debanye' ma tinye adreesị email gị na paswọọdụ pụrụ iche
Nzọụkwụ 2: Tinye ego na Akaụntụ Libertex gị
Na-eche na ị melitela akaụntụ Libertex gị, nke na-ewe ihe na-erughị nkeji ole na ole - ị nwere ike ịga n'ihu wee kwụọ ụgwọ akaụntụ gị site na iji otu ụzọ nkwụnye ego anabatara nke edepụtara n'ihu peeji a.
Ugbu a, i nwere ike melite gị Libertex interface ona gị trading ịke. Agbanyeghị na ikpo okwu azụmaahịa anaghị emezue, ị nwere ike iji ndebiri dị iche iche wee gbanwee ntọala leverage gị wdg.
Nzọụkwụ 3: Ịmalite ahia
Mgbe ịmechara ego na akaụntụ gị, ị nwere ike ịmalite ahia! Ọ dị mfe ịnyagharịa weebụsaịtị Libertex, mana anyị na-akwado ịmalite site na akaụntụ ngosi ma ọ bụ obere nkwụnye ego mbụ - opekata mpe mgbe ị hụrụ ụkwụ gị n'elu ikpo okwu.
Na mkpokọta, Libertex na-enye ezigbo akụ dị iche iche a pụrụ ịtụkwasị n'elu ikpo okwu ya ma bụrụ otu n'ime ndị na-ere ahịa ole na ole na-enye mgbasa mgbasa - nke bụ egwu na ntị ndị ahịa ọ bụla!
Banyere ọdịnaya agụmakwụkwọ, Libertex dị ukwuu maka ndị mbido. Enwere webinars, mmelite akụkọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 ihe mmụta zuru ezu maka ndị ahịa - tinyere vidiyo zuru ezu. Platformlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na-arụ ọrụ nke ọma, ị nwekwara ike iji MT4 zụọ ahịa na ịdị mfe.
Libertex bụ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) na-achịkwa ya ma nye ya ikikere. Nke a pụtara na saịtị ahụ na-achịkwa nke ọma yana ga-agbaso iwu nke ahụ a na-ekwu maka ya.
Achọrọ m paspọtụ iji mepee akaụntụ Libertex?
ID ga-achọ Ndenye foto mana ị nwekwara ike iji ikikere ịnya ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe niile ị nwere - dịka iwu KYC ga-abụrịrị NJ gị gosipụta foto gị, aha na ụbọchị ọmụmụ gị.
Enwere m ike ịzụ ahịa cryptocurrencies site na Libertex?
Ee, enwere ọtụtụ ụdị cyptocurrencies dị maka ịzụ ahịa n'elu ikpo okwu a - Litecoin, DASH, Bitcoin Cash na Ethereum ịkpọpụta ụfọdụ.
Libertex ọ dabara na ngwanrọ MetaTrader4?
Eeh. Nwere ike mfe nweta gị Libertex na akaụntụ site na MT4, ma na ngwa (Android ma ọ bụ iPhone), ma ọ bụ site na weebụsaịtị. I nwekwara ike ibudata MT4 software jidesie gị na desktọọpụ ngwaọrụ wee banye na gị Libertex nzere
Enwere ebe ngosi ngosi Libertex dị?
Eeh. A na - anabata ndị ahịa ọ bụla ka ha debanye maka akaụntụ ngosi ego na - enweghị ego - nke a na - abịa na $ 50,000 na ego ngosi, yana enyo ọnọdụ ọnọdụ ahịa.
Ndi Libertex enwere ndi bi na US?
O di nwute na ndị bi na US enweghị ike ịzụ ahịa site na Libertex. Ihe kpatara nke a bụ na Libertex na-achịkwa CySEC - ọ bụghị Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ma ọ bụ US Securities and Exchange Commission (SEC).
Kedu mpempe ego m ga - eji azụmaahịa na Libertex?
Libertex na-enye ndị ahịa mkpọsa leverage ruo 1:30, yana ndị ahịa ọkachamara na-enye ihe ruru 1: 600.
Libertex ọ bụ usoro ịzụ ahịa ziri ezi?
Eeh. Libertex na-achịkwa nke ọma site na CySEC. Nke a kwesịrị inye gị udo nke uche na ụlọ ọrụ ahụ na-edozi nyocha oge niile, na-eme omume ndị ahịa kwesịrị ntụkwasị obi ma na-agbaso iwu siri ike nke ahụ na-etinye.